Xamas iyo Fatax oo heshiis kala saxiixday – SBC
Xamas iyo Fatax oo heshiis kala saxiixday
Cairo:- Magaalooyinka waa weyn ee dhulka filistiiniyiinta ayaa weli waxa ka soconaya dabaal degyo ku saabsan saxiixa heshiiska nabadeynta ee dhaqdhaqaaqa Xamas iyo Ururka Fatax taasoo lagu soo afjarayo khilaafka u dhexeeyay labada dhinac mudo dhan afar sano kadib markii Fatax ay diideen in ay aqoonsadaan guusha ay Xamas ka gaareen doorashadii guud ee dalkaas sanadkii 2006-dii.
Madaxa maamulka Falastiin Maxamuud Cabaas oo maamlmahan ku sugnaa magaalada Qaahira ayaa shalay si rasmi ah u saxiixay heshiiska nabadda ee uu ka qeyb galayo madaxa Xafiiska siyaasadda ee Xamas Khaalid Mashcal.
Saxiixa heshiiskan kadib ayaa waxaa la filayaa in maalmaha soo socda uu bilaabmo dhaqan gelintiisa oo ay kamid tahay in la sameeyo xukuumad KMG ah oo ka shaqeysa qabashada guud ee cusub oo ay ka qeyb galaan dhammaan dhinacyada kala duwan ee filistiin.
Dhaqdhaqaayada kale ee ka dagaalama dalka Falastiin aya soo dhaweeyay heshiiska labada dhinac waxeyna sheegeen in dhinacooda ay saxiixayaan heshiis walba oo mideynaya fikirka dalka Falastiin.
Madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas ayaa sheegay in Isra’el ay ka faa’ideysan jirtay khilaafka u dhexeeya Falastiiniyiinta dhexdooda sidaa dardeed aanay dooneynin heshiis ay wada gaaraan dhaqdhaqaaqa Xamas iyo Ururka Fatax ee haya talada dalkaas.
Xilli sii horeysay waxa uu sheegay Ra’izul wazaaraha Isra’el Bin yamin Ntanyaho in Ururka Fatax ay kala doortaan heshiiska ay la galaan Isra’el iyo mid ay la galaan dhaqdhaqaaqa Xamas oo aanay suura gal aheyn in labada dhinacba ay heshiis la gaaraan, tan u wanagsan Fatax ayuuna ku sheegay in ay tahay heshiis ay la galaan Isra’el.